Uwelwe yindlu umndeni ohlala kwaZayeka | News24
Uwelwe yindlu umndeni ohlala kwaZayeka
Izithombe: ZithunyelweIndlu yomxhaso yakwaNgcobo engaqediwe ukwakhiwa.
UMNDENI wakwaNgcobo endaweni yakwaZayeka eSweetwaters uwelwe yingxenye yendlu abahlala kuyona ngoLwesihlanu oledlule mhlaziyi 29 kuSepthemba ngenkathi kunomoya obuvunguza ngamandla.
Ilungu lalomndeni, uNkk Makhosazane Ngcobo uthe kuwe udonga lasekhishini nolwasegumbini lokulala okugcine kushiye lomndeni negumbi elilodwa abalisebenzisayo kumanje.
Uthe: “Nami ngibikelwe ngocingo ukuthi sekuwe udonga ngoba besengisemsebenzi ngaleso sikhathi,” kusho uNkk Ngcobo.
Uqhube wathi into emuthusayo ukuthi kwalona leligumbi elilodwa abalisebenzisayo linezindonga eziqhekekile futhi kwalona lingawa uma kungaphinde kubekhona umoya ovunguza ngamandla.
Uthe emuva kokuthola umbiko ngokuwa kwezindonga zendlu uphuthume ekhaya wafika wathola ukuthi kukhona izimpahla ebesezintshontshiwe.
“Kuntshontshwe izivalo zendlu yomxhaso engakhelwa yona kanye nezinye izimpahla,” kusho uNkk Ngcobo.
Ngokusho kukaNkk Ngcobo sekuphele iminyaka emibili kwaqalwa ukwakhiwa kwendlu yomxhaso yalomndeni kodwa eyikapheli njengoba ishoda ngophahla kanye nezicabanga osekuyinkinga manje njengoba ngoLwesihlanu sekwenzeke isenzakalo esibi sokuwa kwezindonga zendlu yabo endala.
“Kusukela ngoSepthemba 2015 kwaqala ukwakhiwa kwendlu yomxhaso kuze kubemanje ayiphelile sekuze kwawa ingxenye yendlu esihlala kuyona okusiphoqe ukuthi sithuthe ezinye izimpahla sizibeke komakhelwane, kumanje kunzima ukuhlala kule endala indlu njengoba kuwe izindonga kanti futhi akuhlaleki nakule ekahulumeni njengoba ingaphelile,” kusho yena.
Uthe umyeni wakhe, uMnu. Siphiwe Ngcobo sewake waya kwaze kwaba kabili eyobuza ukuthi yini imbhangela yokuthi kuthathe isikhathi esingaka ukuthi kuqedwe ngokwakhiwa kwendlu yomxhaso kodwa watshelwa ukuthi bazofika omakhi bezoyiqedela.
“Kodwa akukaze kufike muntu. Ngabo Juni nami ngaya ngiyobuza ukuthi yini ebambezelile ngatshelwa ukuthi kushintshwe osonkontileka abakha izindlu kwathiwa angilinde ngoba usonkontileka omusha usaqedela ezinye izindlu kodwa ziningi izindlu esezakhiwe zaqedwa ezinye ezaqala ukwakhiwa ngemuva kweyalayikhaya kodwa eyethu kusamile namanje,” kusho uNkk Ngcobo.
Uthe endaweni ahlala kuyona kukhona umakhelwane naye eyakhe indlu yomxhaso eshodelwa uphahla kodwa zikhona ezinye eziningi esezakhiwe zaqedwa.
Leliphephandaba liyithumelile imibuzo kumasipala waseMsunduze ukuthola isizathu sokuthi kungani sekuphele iminyaka emibili indlu yakwaNgcobo ingaqedelwe ukwakhiwa kodwa ibingakaphendulwa ngumxhumanisi wakwamasipala ngesikhathi sokushicilela.